२०७० चैत १७ गते १५:०५
तपाईंले सरकारी जागिर खाएको चर्चा छ नि ? मैले सरकारी जागिर खाएको भन्ने सरासर झुठ र कपोलकल्पित कुरा हो । कुरा नबुझ्नेले यसो भनेका हुन् । सरकारले नै तपाईंलाई सगरमाथा आरोहीको सम्पर्क अधिकृत तोकेको रहेछ नि त ? त्यो कुनै जागिर होइन । खास...
२०७० फागुन २८ गते ९:३१
के गरेर समय बिताइरहनुभएको छ ? पार्टी काममा छु । जिल्लाहरुका सम्मेलनमा गइरहेको छु । नेता कार्यकर्ता र जनतासँग भेटघाट गर्छु यसरी नै बितेको छ । संविधानसभा बाहिर बसेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसबारे हामीले धेरै कुरा बताइसकेका छौं । हामी...
२०७० फागुन १६ गते ४:२४
स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी हुनुभएन, किन ? स्थायी कमिटीको बैठक अस्पतालमा आयोजना गर्ने कुराप्रति मेरो असहमति हो । हाम्रा कोही जिम्मेवार कमरेड बिरामी हुनुहुन्छ र बैठकमा आउन सक्नुभएको छैन भने उहाँको राय लिन सकिन्छ । फोनबाट लिन सकिन्छ, पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पठाएर लिन सकिन्छ...
२०७० फागुन ११ गते १७:२५
जलस्रोत,पर्यटन,कृषि र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र मध्ये कहाँ लगानी गर्दा नेपालको बिकासमा सहयोग पुग्छ त्यसबारेमा नेपाल र कतारको संयुक्त समिति बनाएर अध्ययन गरौ,त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी तयार छौ भन्ने कतार सरकारको सकारात्मक धारणा थियो ।...
२०७० फागुन ५ गते ७:००
फेसबुक दुरुपयोग गरेर अपराधकर्ममा संलग्न हुने, व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न साइबर कानुन कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ...
२०७० माघ १६ गते ९:२७
प्रकाश दाहाल एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का एक मात्र पुत्र हुन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमले खुवै पछ्याइरहेका उनले सामाजिक सञ्चालहरुमा पनि राम्रो स्थान पाइरहेका हुन्छन् । विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा केही नेताले पार्टीको हारमा प्रकाशको समेत हात रहेको बताएपछि...
२०७० माघ ११ गते १३:३९
बीपी पुत्रसमेत रहेका काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइराला सभापति सुशील कोइरालाका विश्वासपात्र मानिन्छन् । पार्टी संस्थापकका छोरा र सभापतिका पारिवारिक सदस्यसमेत रहेका कोइराला आफू पारिवारिक राजनीतिबाट टाढै रहेको दाबी गर्छन् । यद्यपि उनी आफू राजनीतिमा आउनुमा पारिवारिक कारण पनि एक रहेको स्वीकार्छन् । कोइराला...
रवीन्द्रप्रताप भन्छन् : ‘मलाई प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले सभासद बनाएका हुन्’
२०७० पुष २५ गते ७:४०
रवीन्द्रप्रताप शाह पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हुन् । तर यत्तिले मात्र उनको परिचय पूरा नहुने भएको छ । शाह एकीकृत नेकपा माओवादीको सिफारिसमा समानुपातिकतर्फबाट सभासद बनेका छन् । उनी सभासद भएको विषयले एकीकृत माओवादीभित्र एक प्रकारको हलचल नै ल्याइदियो । बाहिर नि त्यसको चर्चा अझै सेलाएको...
लोडसेडिङ घटाउन गाह्रो छैन : पूर्वमन्त्री विष्ट
२०७० पुष २० गते १०:३४
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गोकर्ण विष्ट संविधानसभा निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका छन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका विष्ट त्यतीबेला गरेका कामबाट निकै चर्चामा पनि आए । चुनावपछि पनि उनलाई धेरै युवाले आशा गरेको नेताको...
२०७० मंसिर २० गते १४:२८
हामीले धाँधलीको मात्र कुरा गरेका छैनौं । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचनका बारेमा प्रारम्भिक समीक्षा गर्‍यो । त्यसको गम्भीर र विस्तृत समीक्षाका लागि अर्को केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यसको केही समयपछि नै हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौं । हामी अझै गम्भीर र...
२०७० मंसिर ६ गते १३:४५
पहिला संविधानसभा निर्वाचन अभूतपूर्व रुपमा सफल भयो भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, फेरि अहिले षड्यन्त्र भयो भन्नु भएको छ ? यसले आममानिसमा भ्रम सिर्जना गराएन र ? पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि हाम्रै पहल र अग्रसतामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भएको हो । संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली...
बाघ मार्ने हामी,जुंगा उखेल्ने गगन ?
२०७० कार्तिक २५ गते ८:२९
स्वदेशी चिकित्सक, औषधि र उपचार पद्दतिप्रति मेरो विश्वास हिजो पनि थियो र आज पनि छ । त्यतिखेर मात्र होइन, म अघिदेखि नै आफ्नो देशका डाक्टरहरूको विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । आफ्नो देशमा भएको कुरामा विश्वास गरेर मात्र आफूलाई विश्वास गर्न सकिन्छ...